Ukuhlala okunethezeka eduze kwase-Oakbrook Terrace - I-Airbnb
Ukuhlala okunethezeka eduze kwase-Oakbrook Terrace
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Tyler
Lena indawo enhle yokuhlala eyi-double queen enakho konke ukuthintwa kwesimanje kanye nezinsiza umuntu angazicela. Ngaphakathi kwesikhala uzojabulela bonke ubumfihlo beyunithi ekhoneni. Indawo enhle yokuhlala eshiswe yilanga enokukhanya okuningi kwemvelo nokunye ukushona kwelanga okuhle kakhulu kuvulandi wangasese noma efasiteleni legumbi lokuhlala kusihlwa. Ibhodlela lamahhala lewayini namanzi asebhodleleni afakiwe.
Lapho kungenwa kukhona ikhabethe lejazi elincane kwesokudla lezicathulo, amabhantshi kanye nemithwalo. Kukhona newasha esitakika kanye nesomisi ekhabetheni elingakwesokudla kwesibuko esigcwele ngaphandle kwephasishi. Ibhavu elilodwa eligcwele elineshawa, ubhavu, nendlu yangasese okuhlanganisa nezinto zokusetshenziswa zansuku zonke zendlu yangasese. Igumbi lokulala linemibhede yezindlovukazi ezimbili kanye nekhabethe lokungena eligcwele ama-hangers, i-hamper kanye nesiteshi soku-ayina. Ikhishi/indawo yokuhlala inomqondo ovulekile one-breakfast bar, izinto zikagesi zensimbi engagqwali, i-TV yesikrini esiyisicaba, usofa lokuhlala, i-loveseat kanye ne-balcony yangasese enamalambu e-patio nefenisha.
Indawo enokuthula ehlehlele emuva emigwaqweni emikhulu nemigwaqo emikhulu yenza kube nesimo esinokuthula esiphephile esingajatshulelwa yibo bonke.